Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Odion Ighalo Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya maara; "Odion". Ihe Odide Anyị Ighalo Ụmụaka Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-ezighị ezi Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha ahụ na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch facts (amaghị ihe) gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ Premier ya na Watford ma ole na ole tụlee Odidi Ighalo Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ndụ mbido
Aha ya nile bụ Odion Jude Ighalo. A mụrụ ya na 16th ụbọchị nke June 1989 na mpaghara ghetto Ajegunle, ebe dịpụrụ adịpụ nke Lagos Lagos mara ọkwa maka ịme ọtụtụ ndị na-agụ egwú na ndị eze ghetto. A mụrụ Odion nye nne ya, Martina Ighalo (onye bụbu onye ahịa azụ) na Nna, Paul Ighalo.
Ighalo malitere site na ndaputa ma tolite na ezighi ezi ezinulo. N'okwu ya ... "N'oge ahụ, na Ajegunle, ọ na-esiri ike ịdị ndụ, siri ike iri nri, ọ bụ ya mere m ji kelee Chineke. Ndị mụrụ m anaghị enwe ihe ọ bụla anyị chọrọ ma ọ bụ dị anyị mkpa, anyị aghaghị ịlụ ọgụ, " ọ gwara The Guardian.
Ọ bụ ezie na nna ya enweghị ọtụtụ ọrụ, mama ya nwere ụlọ ahịa na-ere ahịa ebe ọ na-ere mmanya na ihe oriri. Nwa nwoke Ighalo na-eji ihe eji ere ya ma buo ya 'mmiri dị ọcha' nke mere na nwa ya, Odion Ighalo nwere ike ịgba bọl. Ọ ga-azụta ego iji zụta akpụkpọ ụkwụ maka nwa ya nwoke mgbe nna ya na-aga n'ihu iji nweta ego njem ya iji gaa ụlọ akwụkwọ. N'ezie, nsogbu.
Dị ka ọ dị na ọtụtụ ụmụaka na-eto eto na Nigeria, ndị nne na nna Ighalo ekwenyeghị banyere ọchịchọ nwa ha ịghọ ndị na-eto eto. Ọ bụ ezie na mama ya kwadoro ọchịchọ ya mgbe nna ya chọrọ ka ọ gaa ụlọ akwụkwọ na ọmụmụ ihe n'ihi na ọ dị nchebe karịa ịnọ n'ọhịa. A maara nke ọma na okwu Paul Paul nke Ighalo wuru.
Dika nwatakiri, Odion Ighalo na ndi otu ndi otu egwuregwu ga-adutu ebe obibi ha mgbe ha nuru mkpu oku mgbe ha na-azuta. Mgbukpọ ahụ amaghị ihe dị iche n'etiti ndị na-eto eto na ndị ahịa na-ere ọgwụ na-ere ha akụrụngwa na akụkụ nke pitch, bụ ndị ndị uweojii na-ezube. Dị ka DailyMail kọrọ, na-eto eto na Ajegunle ghetto, na obodo Naijiria dị na Lagos, ndụ nwere ike ịdị otú ahụ. Ọ bụ ya mere papa ya ji jụ ya ka ọ bụrụ onye na-agba ọsọ.
Dika Ighalo si etinye ya, ..."Mama m guzoro n'akụkụ m wee chebe ya site n'aka nna m nke ga - agbanye ya ọsọ maka ịhapụ ụlọ akwụkwọ iji kwado football"
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ọrụ, na Nchịkọta
Odion tolitere dị ka ụmụaka na-ele ihe ndị na-amasị ya Kanu Nwankwo, Samson Siasia, Jay Jay Okocha, Samuel Eto'o, Andy Cole wdg. Ha bụ ndị nlereanya ya nke kpaliri ya ka ọ bụrụ onye ọkụ.
N'oge ahụ, Odion Ighalo nwere ike iji njem na-aga ebe obibi iji kwado bọlbụ n'ime agbata obi Ajegunle ebe ọ na-eji ndị ọzọ egwu egwuregwu. N'ọgba ọsọ iji pụọ na ịda ogbenye, Odion aghaghị ịkwụsị ịga akwụkwọ iji kwadoro ịgba chaa chaa. O leghaara ihe si na papa ya pụta. N'agbanyeghị ịda ogbenye nke gbara ọnọdụ ya gburugburu, onye na-eto eto na onye na-egwu egwu oge nile kpebisiri ike ime ya na ọrụ ọ họọrọ. Ọ na-egwuri egwu mgbe ụfọdụ na afo efu.
Mgbe Ighalo malitere n'okporo ámá Lagos, ọ dịghị atụ anya ịkụ egwu na Njikọ Premier England. O kpebisiri ike ịkụ bọl ma mee ego iji chebe ezinụlọ ya na ilekọta nne ya na-ahụ n'anya. Onye na-amakarị onye amateur na-egwuri egwu na-egwuri egwu na otu ebe a na-akpọ obodo "Maracana" na obodo Tolu nke Ajegunle. Ọ bụ ọkwa ebe mmasị nke Emmanuel Amunike na Kanu Nwankwo Egwuru egwu dika ndi amateurs. Ọ malitere igwu egwu na Prime FC ma mechaa kwaga Julius Berger nke dị n'okpuru.
Ihe ebube Ya mechara bia. Odide nke Argentine FIFA na-ahụ maka Marcelo Houseman (nke dị n'okpuru ebe a) chọtara Odion onye gbara ya ume wee mee ya ikpe na Norway.
Na Norway, o gafere ule ya ma buru ụzọ rụọ ọrụ dịka onye ọkachamara na Lyn Oslo ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ itoolu na egwuregwu 20 tupu ya akwaga Udinese - Itali. N'oge na-adịghị anya, Granada bịara kpọọ ebe ọ ghọrọ akụkọ ntụrụndụ maka ọgbakọ ahụ, na-enyere ha aka inwe ọganihu na Spanish La Liga na 2011. Obodo Spanish na-akpọ akụkụ nke ámá egwuregwu ya mgbe ọ gasịrị. Nke a na-adọrọ mmasị ụlọ ọrụ Njikọ nke England, Watford. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ndụ mmekọrịta
N'èzí n'èzí ahụ, Ighalo bụ nna na-ahụ n'anya nke ụmụaka atọ ma na-arụ ọrụ ọganihu ya na nwunye ya mara mma na obi nwata, Sonia Ighalo dị n'okpuru ebe a.
Sonia na-akwado di ya ma n'ụzọ mmetụta uche ma n'ụzọ ime mmụọ. N'okwu ya ..."Oge ọ bụla, tupu ya agae egwuregwu, ana m ekpe ekpere maka ya ma na-achọ ya kacha mma. Obu Chineke, O bu onye kwesiri ntukwasi obi nye ayi anyi na enye ya ekele nile. Ọ dịghị ihe dị ukwuu m na-agbaso ma ana m agba ya ume dị ka di m n'oge ọ bụla ọ na-egwu egwu, " Sonia Ighalo gwara Nigerian Punch Newspaper.
Onye Omenala: Odion malitere ime ka ezinulo ya bia na mgbasa ozi mgbasa ozi nke mere ka otutu ndi mmadu chere na ya abughi di na nwunye megide nkwenye ochie. N'okpuru ebe a bụ foto nke Odion Ighalo ya na nwunye ya mara mma, nne na ụmụaka na njem ụgbọ mmiri na China.
Ighalo hụrụ mama ya n'anya nke ukwuu na ọ dịghị mgbe ọ na-eburu ya na ya na njem ezinụlọ ya. N'ezie, nwunye ya bụ Sonia na nne di ya gbara.
Nna-Nwa-nwanyi n'anya: Ighalo na nwa ya nwanyị naanị ya na-ekerịta ihe jikọrọ ya, na ọ dịghị onye n'ime ezinụlọ ya, ọbụna nne ya nwere ike ịkwado. Ma nna na nwa ya abughi nke a na-enweghi ike ikpochapu, ha na-agbasikwa ike karia oge. N'okpuru ebe a bụ foto nke abụọ.
Ezigbo Nna: Ighalo bụ n'ezie, onye ezinụlọ dị mpako, onye wepụrụ ndụ ya pụọ ​​na football kwuru, sị, "N'ezie m lụrụ di ma ọ bụ nwunye na anaghị m ekwurịta banyere ezinụlọ m na mmekọrịta, ọ bụ nkeonwe," ọ gwara Naijiria Naijiria.
Ọ gara n'ihu ..."Nwunye m dị oké mkpa maka ọrụ m. O nwee ike iwuli ezigbo ụlọ ma mee ka mụ na ụmụ m nwee obi ụtọ. Ọ bụ ihe niile nye m, Achọrọ m ikwu na alụmdi na nwunye m emebeghị m n'oge na-adịbeghị anya bụrụ nwoke zuru ezu, "
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na Odion egosiwo na ọ bụ ọtụtụ ndị ezinụlọ ya, ebe ọ na-adịghị eme ihere iji soro ụmụ ya mara mma na-eketa oge dị ebube.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ihe Ezinụlọ
Obere obere ekwuwo banyere nna ya kemgbe mmalite nke edemede a. Ighalo nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo ya nso n'ihi na ọ ga-abụ na ya na nwa ya enweghi mmekọrịta ọ bụla. Karia nke a, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ na-emegide ya ịbụ onye na-agba ama.
O bu ihe nwute, Odion Ighalo's papa, Pa Paul Ighalo abiala n'agbata onwu ya n'otu ubochi onwu (onu ogugu onwe ya) na Agidigbo, Imadu, Esan West Local Government Area nke Edo State. N'okpuru ebe a bụ foto nke Late Pa Paul tupu ọnwụ ya. N'ile anya na foto a na-egosi na ọ nwere nwa ya mgbe ọ nọ na 50.
N'ikwu okwu banyere ọnwụ nna ya, nwanne Odion, Daniel Ighalo, kwuru, sị: "Papa m nọ na njedebe 90 ma ọ dịghị mgbe ọ mere mkpesa na ọ na-arịa ọrịa. O di nwute na, n'ehihie nke ụtụtụ echi, a gwara anyị na ọ dara ọrịa. Otu nọọsụ si Ụlọ Ọgwụ Faithland bịara ebe ọ ga-aga n'ihu tupu ya ahapụ mmụọ. O juru anyị niile anya n'ihi na ihe ọ bụla adịghị ya mma. N'ụtụtụ Mọnde mgbe ndị mmadụ matara na ọ bụ oge na-adịghị anya, ụlọ anyị bụ ụdị Mecca ruo mgbe a kpụrụ ozu ya na Edo State n'otu ụbọchị maka olili. "
Ọnwụ Papa Paul Ighalo hapụrụ Odion Ighalo ka ọ ghara ikwu okwu banyere eziokwu ahụ na ya nwere mkparịta ụka nna ya na ụbọchị abụọ tupu ya anwụọ, papa papaa kpere ekpere maka ya ka o nwee ihe mgbaru ọsọ dị ka ọ na-enwe mgbọrọgwụ Goal.
Nne Ya Ọzọ: Nwaanyị Ighalo dị ndụ ma na-aghọrọ mkpụrụ nke ọrụ ya. Sọ na - ebizi ugbu a na ndụ dị jụụ na ebe obibi, ụgwọ ọrụ maka nraranye ya, ịkwado na ịchụrụ nwa ya. The Ighalo na-ebi ugbu a na etiti obodo Lagos maka ndụ dị mma, na-ekwubi akụkọ dị egwu nke na-esi na ahihia gaa na amara.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -A na-agba ọsọ
Ighalo bụ onye na-atọ ọchị na nke ahụ doro anya na ya na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ma ntakịrị ndị mmadụ maara na Ighalo bụ onye na-agba bọl dịka ọ ga-egosi site na ọbịbịa ya Anthony Joshua World Heavyweight megide megide American Charles Martin.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ntinye na-abanye n'Òtù Mba
Odion Ighalo abanye n'ime ndi otu mba n'oge. N'agbanyeghi na nkwa ya n'oge Udinese na Watford na Watford na agburu, Ighalo abanyeghi n'ime otu ndi otu ruo mgbe o bu 26. Onye bụbu onye nkụzi Daniel Amokachi kpọrọ ya maka nke mbụ na March 2015.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ahụhụ maka 'Daalụ aha Jizọs
Onye isi Gree Gris Grisha nyere Ighalo otu kaadị edo edo mgbe ọ kwụsịrị ka uwe elu ya kpuchie ya "Ekele Gị Jizọs" ederede obere oge ma nye Nigeria ihe mgbaru ọsọ. Dị ka a ga-asị na kaadị edo edo ezughị ezu, FIFA jikwa egwu inye ya ikikere ọzọ. Dị ka iwu ha si dị, a machibidoro ndị na-egwu egwuregwu n 'ngosi nke mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke a na-enweghị mmasị, okpukpe ma ọ bụ ozi onwe onye na-enweghị isi.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Inweghi onwe onye
Ọ na-enyeghachi ọha mmadụ nnukwu ihe. "Ana m eme atụmatụ imeghe nwa mgbei na Lagos" Ighalo kwuru otu ugboro. "Anaghị m eme ihe ndị a n'ihi na m chọrọ ka ndị mmadụ too m. Ana m eme ha tupu m abanye na Watford - kemgbe Chineke malitere ịgọzi m na m na-enyere ụmụaka aka, na-enyere ndị inyom di ha nwụrụ aka. "
Dika onye pastọ Benjamin Igoh, bu onye hiwere ulo oru Naijiria nke di na Wazobia, Ighalo enweela otutu ochicho na enweghi ihe ndi ozo, karia n'ime Ajegunle, ebe onye agha ahu malitere oru tupu ya agawa Europe, bu ihe kpatara ya.
A maara Ighalo ka ọ bụrụ Onye Kraịst na-efe ofufe, bụ onye na-enyekarị ụgwọ ọrụ ya maka òtù ọrụ ebere nke Naijiria iji nyere ụmụaka dara ogbenye aka, ụlọ akwụkwọ na ndị inyom di ha nwụrụ n'okpuru ịda ogbenye. "Ezinụlọ m bụ No1 - kwa ọnwa ka m na-ezigara ha ego n'ụlọ ha, mana m na-ezigakwa onyinye maka obere ihe ùgwù n'ihi na esite na ịda ogbenye," onye egwu ahụ gwara Mirror na 2015.
Odion Ighalo Child Story Plus Ihe na -Ngwakọta nke otutu
Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime uru nke igwu egwu n'ọtụtụ egwuregwu n'ofe Europe bụ ohere ịmụta asụsụ na omenala dị iche iche. Nke a bụ ikpe Odion Ighalo.
Na 27, Ighalo ejirila rụọ egwuregwu anọ dị na Europe. Nke a site na ihe ọ pụtara pụtara na ọ ga-enwe ike ikwurịta okwu na asụsụ atọ ọzọ na-abụghị Bekee. Ndi I Maara? .. Ighalo mere otu onye dika onye ntụgharị okwu maka ndi Spen na ndi Italia na Hornets.
AKWỤKWỌ NA -ECHI: Daalụ maka ịgụ Akwụkwọ anyị Ighalo Ụmụaka Akụkọ na akụkọ eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Mustapha Mohammed June 26, 2019 na 9:15 pm
Ahụrụ m ighalo maka nrube isi nye nne na nna ya & nke kachasị mkpa maka ịsị na ọ na-eziga ego iche na ezinaụlọ ya, ndị nọ n'okpuru ogbenye ịda ogbenye n'ihi na o si na ịda ogbenye.i toro ya maka nkwupụta a. M ga-eweli ya elu n'etiti ndị niile na-agba ọsọ egwuregwu. ọ nwere ike ị nwere afọ ojuju maka afọ ndụ gị niile.
Mustapha Mohammed June 26, 2019 na 9:31 pm
M hụrụ m n'anya n'ihi enyemaka ya nye ndị ogbenye.
Freedom Eprel 14, 2020 Elekere 8:16 nke ụtụtụ
Biko achọrọ m enyemaka ya
Achọrọ m ịghọ onye na-egwu egwuregwu bọlbụ na man utd mana enweghị ego ịdebanye aha na ụlọ akwụkwọ dị mma ọ nweghị onye nkwado biko achọrọ m enyemaka